ဇင်လင်း – ဗိုလ်အောင်ကျော်ရဲ့ အခန်းဆက်တိုက်ပွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
(မတ်လ ၂၀၁၅၊ လက်ပံတန်းကျောင်းသား အရေးတော်ပုံသို့)
• အံ့ဖွယ်ဘနန်း…လူထုပရိသတ် ရံဝန်း
• လင်းယုန်အုပ်ရဲ့ ကြွေးကြော်သံ
• သံတိုင်နဲ့ လက်ထိပ်…ပုလိပ်နဲ့ လုံထိန်း…
ယုံကြည်ချက် အလင်းရောင်ဆီ …သစ္စာမပျက် ချီတက်နေကြပြီလေ။
• ဗိုလ်အောင်ကျော် ရင်းခဲ့တဲ့သွေး….
ဒီ ကနေ့ ကျောင်းသားထုရဲ့သွေးဟာလည်း….
ရွှေရေစိမ် ဒီမိုကရေစီအတုကို မသွေမုချ ကျိုးပဲ့ကြေမွစေလိမ့်မယ်…။
ဖေါ်ကျူးးဖို့ ဝေးစွ…တစ္ဆေခြောက် ခံရသလို..ကြောက်နေတာပ။
• ဗိုလ်အောင်ကျော်….ရဲဘော်ကို ကိုယ်စားပြု…ကျောင်းသားလူငယ်ထုရဲ့…
လက်သီးဆုပ်များစွာ … မိုးယံမှာ … ပျံဝဲနေတယ်…
ဗိုလ်အောင်ကျော်…. လူထုဟာ ကျောင်းသားထုနဲ့ တသားတည်း ရှိနေတယ်…
ဗိုလ်အောင်ကျော်…. လူထုဟာ ရဲဘော်ကို သတိရနေဆဲရှိတယ်…
လူထုဟာ…ကိုလိုနီခေတ် အတွင်းဝန်ရုံးတိုက်ပွဲကို သတိရနေဆဲရှိတယ်…။
ဒီကနေ့ လူထုဟာ ကျောင်းသားထုဘက်မှာ…မားမားမတ်မတ်ရပ်နေဆဲပါပဲ။
ဒီကနေ့လူထုဟာ လက်ပံတန်းသပိတ် ဘက်မှာ … မားမားမတ်မတ်ရပ်နေဆဲပါပဲ။
တရားမျှတတဲ့ အရေးပုံမှန်သမျှ…လူထုက ထောက်ခံကြစမြဲ ဖြစ်တယ်။
တရားမျှတတဲ့ အရေးပုံမှန်သမျှ သမိုင်းက ကမ္ဗည်းတင်စမြဲ ဖြစ်တယ်။
• ဗိုလ်အောင်ကျော်… ရဲဘော်ကို ဂုဏ်ပြု…
ကျောင်းသားထုဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် တရားမျှတမှုဘက်မှာ သင်နဲ့အတူရှိနေတယ်။
(ဓာတ်ပုံ -ထွန်းဝင်းငြိမ်း ။ ဗိုလ်အောင်ကျော် (၁၉၁၅ ဒီဇင်ဘာ – ၁၉၃၈ ဒီဇင်ဘာ))